तराईमा बिहानैदेखि बाक्लो हुस्सु, कस्तो रहला आगामी तीन दिनको मौसम ? (रिपोर्ट ) – Himalitimes
२०७७ माघ १ ०६:३६ मा प्रकाशित
काठमाडौं । देशमा पश्चिमी वायुकाे सामान्य प्रभाव मौसम जल तथा पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएकाे छ । पश्चिमी वायुकाे प्रभावले देशको पहाडी भू-भागमा आंशिक बदली रहेको छ तराई भू-भागमा हल्का हुसु/कुहिरो लागेको छ ।
प्रदेश १, प्रदेश २ र बागमती प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहने महाशाखाले जनाएकाे छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशका तराईका भू-भागमा आंशिक बदली रहेर देशका अन्य भू-भागहरुमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ ।
प्रदेश १ र गण्डकी प्रदेशको एक/दुई स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ। एक रिपोर्ट
हाल देशमा पश्चिमी वायु तथा स्थानिय वायुको सामान्य प्रभाव रहेको छ । हाल देशको पहाडी भू-भागमा आंशिक बदली रहेको छ तराई भू-भागमा हल्का हुसु/कुहिरो लागेको छ ।आगामी तीन दिनको मौसम पूर्वानुमान
कतिमा हुँदैछ डलरको कारोबार ? यस्तो छ बिहिवार विदेशी मुद्राको विनिमयदर